Shaac laga qaaday tirada Al-Shabaab iska dishay dagaal dhex-maray iga dhexdooda - Awdinle Online
Taliyaha Qeybta 43-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya Jeneral Cali Maxamuud Bagmadow oo la hadlay ayaa faah-faahin dheeraad ah ka bixiyey dagaalkii Al-Shabaab ku dhex-maray degmada Jilib Arbacadii.
Sida ay Awdinle Online ogaatay, dagaalka ayaa dhaxmaray ciidamada Xisbada iyo kuwa Jabhadaha ee Malitariga, waxa uuna dagaalkooda salka ku hayaa khilaaf ku saabsan ajaaniib ku eedeysan basaasnimo.
Jeneral Bagmadow oo la hadlay Idaacada Ciidamada ayaa sheegay kooxda Al-Shabaab ay dagaalka dhaxdeeda ah isaga dileen 12 xubnood oo iskugu jira horjogayaal iyo maleyshiyaad.
Saraakiil amni ayaa Caasimada Online u sheegay in ajaaniibta ku eedeysan basaasnimada ay ka badan yihiin 2 qof ayna u dhasheen laba dal oo kala duwan. Xubnaha qaar ayaa doonaya in la toogto halka qaarkood ay qabaan in aan la dilin sababo badan aawgeed.
Al-Shabaab ayaa hore u dilay dad badan oo isugu jira muwaadiniin iyo ajaaniib kuwaas oo ay ku eedeeyeen basaasnimo. Dadka basaasnimada loo dilay waxaa ku jira caruur iyo dumar.
Dagaalkan ayaa imanaya ayada oo horey sirdoonka Soomaaliya ay u sheegeen inuu jiray khilaaf u dhaxeeyey hoggaanka sare ee kooxda.10-kii March ayay Hay’adda Nabad-Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ayaa sheegtay in kooxda Al-Shabaab ay dishay madaxii hore ee amniyaatka kooxda ee Muqdisho Muuse Macallin (Mucaawiye).
Qoraal ay NISA soo dhigtay barta twitter-ka ayey xiligaas ku sheegtay “in Muuse Macallin lagu dilay magaalada Bu’aale ee gobolka Jubada Dhexe” kadib amar la sheegay inuu bixiyey amiirka Al-Shabaab Axmed Diiriye Abu Cubeydah.
Previous articleWasiir Goodax Barre oo ku baaqay in shacabka Soomaaliyeed ay Alla Bari la yimaadaan
Next articleTaliyaha Laanta Socdaalka Garoonka Galkacyo ee Puntland oo lagu dilay Gaalkacyo